Wararka - Polycarboxylate superplasticizer
Polycarboxylate superplasticizer waa jiilka thrid superplasticizer la taaban karo kaas oo horay uga soo saaray nooca kaligniyamka lignosulfonate iyo superplasticizer nooca naphthalene.
Polycarboxylate superplasticizer waa wax ka badal la taaban karo superplasticizer oo ay baaraan teknolojiyad cusub.waa alaab cagaaran oo cagaaran oo leh tilmaam dhameystiran oo wanaagsan oo aan wasakh lahayn
Polycarboxylate superplasticizer waa nooca ugu dambeeya ee superplasticizer la taaban karo oo leh saamiga yaraynta biyaha oo sifiican u xajinaya jilitaanka marka loo eego labadii nooc ee hore ee shamiitada la taaban karo.
Kala soocida ugu weyn ee polycarboxylate superplasticizer
Marka loo eego muuqaalka sheyga, badanaa waxaa jira laba nooc: nooca dareeraha iyo nooca budada.
Nooca dareeraha ah, waxaa jira waxyaabo adag oo kaladuwan, sida 40%, 45%, 50% iyo xitaa 60% maadooyin adag. laakiin khibradayada iibka, waxay umuuqataa in 50% maadada adag polycarboxylate superplasticizer ay caan ku tahay caalamka. 50% adag content polycarboxylate superplasticizer waa xamuul kharash badbaadinta marka la barbar dhigo 40% iyo 45% content adag, ka sokow ay saamiga waxqabadka kharashka waxqabadka la taaban karo waa mid aad u tartan.
Sanadihii la soo dhaafay, warshado fara badan ayaa bilaaba inay soo saaraan nooca budada ah ee loo yaqaan 'polycarboxylate superplasticizer'. Dabcan, nooca budada ah ayaa aad ugu habboon in la keeno. Sida ku kala duwan isticmaalka, waxaa jira nooc hoobiye ah oo la isticmaalay, nooca dhulka loo isticmaalo iyo shamiito la soo saaray nooc la isticmaalay, iwm.
Sifada ugu weyn ee polycarboxylate superplasticizer
dhammaystirka xajinta xajinta
heerka yareynta biyaha
la qabsiga fiican ee dhammaan noocyada sibidhka
wixii macluumaad dheeraad ah, fadlan booqo degelkeenna